Submission Form - Hoygamaansada
Foomka soo gudbinta
Dooro nooca abaalmarinta Poet of the Year	Woman Poet of the Year	Young Poet of the Year	 The field is required.
Waxaad sidoo kale soo diri kartaa cod ama muuqaal adigoo aqrinaayo gabayga. Tani waa ikhtiyaarkaaga, ma saameyneyso tartankaaga balse waxaa lagu soo daabici karaa baraha bulshada rasmiga ee aan ku leenahay internet-ka. Soo bandhig xeeladaada si duida kuu daawato.
Enter poem title and poem text or upload a file to submit this entry.
Waan aqbalay shuruucda la xiriirta xogta gaarka ah The field is required.